Galmudug oo si KMG ah xiriirkii ugu jartay dowladda federaalka Soomaaliya (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Galmudug oo si KMG ah xiriirkii ugu jartay dowladda federaalka Soomaaliya (AKHRISO)
War-saxaafadeed kasoo baxay wasaarada waxbarashada ee maamulka Galmudug ayaa lagu sheegay inay si KMG ah ay wasaaraddu u hakisay dhamaan wada-shaqeyntii kala dhaxeeysay wasaarada waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya.
War-saxaafadeedka ooo ku saxiixan wasiir ku-xigeenka wasaarada waxbarashada ee maamulka Galmudug Abshir Cabdi Sheekhow ayaa sheegay in wasaarada waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay si cad iskaga dhaga tirtay cabashooyin badan oo ay hore ugu direen.
Wuxuu wasiirka sheegay in wax dhaqaale ah aanu kasoo gaarin wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya, xilli maanta ay bilaabanayso imtixaankii, islamarkaana maamul goboleedyada kale si gaar ah wax loogu qabtay.
Ugu dambeyn, wasiirka ayaa ugu baaqay hay’addaha gargaarka ah inay si siman deeqaha waxbarasho u gaarsiiyaan maamul goboleedyada dalka maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya arrinkaasi kasoo bixi waysay.
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka Galmudug